Isifo seswekile - Shijiazhuang YiLing Hospital
Isifo kwaye afumane unyango
Banokuqonda ezikhethekileyo izifo umanyano kombono ovelela zonke ingqiqo dialectical. TCM liyithatha ntu luphela. Kuba isifo, oko nje kuphela sifo, kodwa umzimba uphela lwabantu. Oku kwenza kube lula ukufumana ingcambu unobangela sifo.
Iindibaniso amayeza emveli ase-China kunye namayeza lwasentshona mihla ukudityaniswa lonke kunye eziphathekayo. Indibaniso ongatshintshiyo kunye yokungcoliswa ludibaniso umanyano kunye dialectics. Yeyona kuyingenelo kakhulu ukuba umzimba womntu ukuze achache.
Ingakumbi umhlaza, yoma kwezihlunu, isifo neuron iimoto, scleroderma, rheumatism, udinwe, isifo seswekile, isifo sezintso, ukuhlanganiswa zemveli unyango amayeza yaseTshayina kwaye Western, unyango uphawu amayeza Chinese emveli, isiphumo yinto ebalulekile kakhulu.
Ukuba ufuna ukwazi indlela zemveli amayeza Chinese ephatha isifo yakho nendlela ukudibanisa amayeza emveli ase-China kunye namayeza wasentshona ukunyanga izifo. Kubhungisana neengcali okanye ushiye us umyalezo.
ngokufunda kwakho inqaku